10/01/12 ~ Myanmar Forward
တောင်းရမ်းစားသောက်သည့် ကလေးများ၏ နောက်ကွယ်မှ ထိန်းသည့်သူများကို အဓိက ဖမ်းဆီးသွားမည်
Posted by drmyochit Monday, October 01, 2012, under သတင်းများ | No comments
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းတောင်းရမ်း စားသောက်သည့် ကလေးများ၏ နောက်ကွယ်မှ ထိန်းသည့်သူများကို အဓိကဖမ်းဆီးရမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ "မန္တလေးမှာ တောင်းရမ်းစား သောက်သူပပျောက်ရေးကို စီမံချက်ရေးပြီး ဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ ရန်ကုန်မှာက လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် အပ်နှံသွားတာကို လေ့လာတွေ့ ရှိရပါတယ်။ မန္တလေးအနေနဲ့ကတော့ အနာကြီးရောဂါသည်တွေကို မတ္တရာမြို့နယ်က အနာကြီးရောဂါ ဆေးရုံကို ပို့လို့ရပါတယ်။ ကျန်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုတော့ ကျန်းမာရေးဌာနက အသက်အပိုင်း အခြားအလိုက် သတ်မှတ်ပြီး လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနကို ပို့ဆောင်ရပါမယ်။ နောက်ကွယ်က ထိန်းတဲ့သူတွေကို အဓိကဖမ်းရပါ မယ်"ဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများကို တရားစွဲဆိုရန် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေတွင် မပါရှိသဖြင့် တောင်းရမ်းစားသောက်သူများ ရှင်းလင်းပပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ကာ အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မြို့နယ်ရဲ တပ်ဖွဲနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလည်း လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
"အရင်တုန်းက တောင်းရမ်း စားသောက်တဲ့သူတွေ၊ ကလေးတွေကို စည်ပင်သာယာရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးခြံတွေမှာ အလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့တွေက ထွက်ပြေးကြတယ်။ နောက်ပြီးမိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က တောင်းခိုင်းတာတွေရှိ တယ်။နောက်ကွယ်က ခိုင်းတာတွေ လည်းရှိတယ်။ ဒါတွေကို အရေးယူပိုင်ခွင့်စည်ပင်မှာမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဌာနတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်"ဟု သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဌာနခွဲမှူး ဦးစိုးတင့်အောင်က ပြောသည်။ ယခုအခါ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ပပျောက်ရေးကို စတင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ၃၅ လမ်း ခုံးကျော်တံတားတွင် တောင်းရမ်း စားသောက်သူနှစ်ဦးအား အမှတ်(၈)ရဲ စခန်းမှ ရဲအက် ၄၀ ဖြင့် အရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေတွင်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် အာဏာပိုင်များ တားမြစ်
Posted by drmyochit Monday, October 01, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ အမျိုးသမီးဦးရေ ၂၀၀ လောက်က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ရာမှာ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေကို အာဏာပိုင်တွေ ဘက်က မနေ့က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး တားမြစ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေက ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ရရှိဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က စတင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး မြို့ နယ်ရဲစခန်းက ပုဒ်မ-၁၄၄ ညမထွက်ရအမိန့်ကို အကြောင်းပြကာ အဲဒီနေ့မှာပဲ ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၂၇ ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ်ရဲစခန်းမှူးဆီကို ဆက်လက်အယူခံ ဝင်ရောက်ခဲ့ရာမှာလည်း မနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အမျိုးသမီးတွေကို ခေါ် ယူတွေ့ဆုံပြီး အချိန် ၂ ပတ်ဆိုင်းငံ့ကာ ကန့်သတ်မှုတွေ ပြုလုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးဆောင်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ညိုအေးက RFA ကိုပြောပါတယ်။"အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ဘက်က နည်းနည်းလေး ကသိကအောင့် ဖြစ်တာပေါ့လေ။ အမှန်တကယ်က ကျွန်မတို့က ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့် လည်ခွင့်ကို ကျွန်မတို့မှာ ဒီကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကုန်လုံး မငြိဖို့အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် လုပ်လိုက်တာ။ အဲဒီ ၂ ပတ် အတွင်းမှာ သူတို့က ဘယ်နေ့မဆို သူတို့က အကြောင်းပြန်နိုင် တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်မတို့မှာ အချက်အလက်တွေ အားလုံးဟာ ပြည်ထောင် စုပြိုကွဲရေးမူ တစ်ခုမှ မပါဘူး"
အာဏာပိုင်တွေဆီကို လျှောက်ထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို လိုက်နာလေးစားပါ၊ မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို OIC ဝင်မစွက်နဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အချိန်ကမှ ရိုဟင်ဂျာမရှိ၊ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများဘဝ လှပလုံခြုံမှုရှိပါစေ စတဲ့ စာတန်းတွေပါဝင်တဲ့ စာတန်း ၈ ခုထဲက တစ်ချို့ကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြန်လည်ပြင်ဆင် လျှောက်ထားဖို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်ညိုအေးက ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်မှာ သေဆုံးသူ အမေရိကန်စစ်သား ၂၀ဝ၀ ရှိပြီ
Posted by drmyochit Monday, October 01, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အာဖဂန် ပဋိပက္ခတွေ အတွင်း အမေရိကန်စစ်သားတွေ သေဆုံးရမှုဟာ အခုဆိုရင်အယောက် ၂၀ဝ၀ ရှိသွားပြီ ဆိုတာကို အမေရိကန် အရာရှိ တဦးက အတည်ပြု ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အာဖဂန်လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးရဲ့ တန်ပြန် တိုက် ခိုက်မှု တခုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတဦး ဟာ အယောက် ၂၀ဝ၀ မြောက် သေဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးဒက်ခ် ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန် စစ်သားတဦးနဲ့ အရပ်သားတဦး သေဆုံးသွားခဲ့ တာပါ။ဒီနှစ်ထဲ အာဖဂန် စစ်သားတွေရဲ့ တန်ပြန် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်ဟာ အခုအချိန် အထိဆိုရင် အယောက် ၅၀ ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလို ကိုယ့်အတွင်း လူတွေရဲ့ တန်ပြန် တိုက်ခိုက်မှုတွေ များလာတာကြောင့် ဒီလ အစောပိုင်း ကတော့ နေတိုး ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေဟာ အာဖဂန် တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးတွဲ ကင်းလှည့် တာတွေကို ကန့်သတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ တောင်ပိုင်းဒေသ တလျှောက်မှာ မီးတွေပျက်ပြီး ဒါဇင်နဲ့ ချီတဲ့ လူတွေကို ဒဏ်ရာစေ ခဲ့တဲ့ အားပြင်းတဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း Jelawat ဟာ အခု ဂျပန် ကုန်းတွင်းပိုင်း ကို အင်အားပြင်းထန်စွာနဲ့ ၀င်ရောက် တိုက်ခတ် နေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်ချိန်မှာ ပြင်း အား တနာရီကို မိုင် ၆၀ ကျော်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နေပြီး မြောက်ဘက်ကို ဆက်လက် ရွေ့လျား နေတာမို့ တိုကျို မြို့တော်ကို ဖြတ်သွားမယ် လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အိုကီနာဝါကို မုန်တိုင်း ဖြတ်သန်းနေ ချိန်မှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အမျိုးသားတဦး ပင်လယ်ထဲ မျောပါ သွားခဲ့သလို လူပေါင်း ၁၄၀ ကျော် လောက်လည်း ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့ကြတယ်လို့ ဂျပန် NHK သတင်း မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက နာဂိုရာ (Nagoya) မြို့မှာ ရေလွှမ်းမိုးမယ့် အန္တရာယ် ရှိနေတာမို့ ဒေသခံ ၅ သောင်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ မီးမရဘဲ နေနေရပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း Jelawat ဟာ တနင်္လာနေ့ အစောပိုင်းမှာတော့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထဲကို ဦးတည်ရွေ့သွားဖို့ ရှိပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းက မထွက်ခင်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကို ဖြတ်သန်းသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ အုပ်စိုးမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံ အနောက်ဘက် Qinghai ဒေသမှာ တိဘက် အမျိုးသားတဦး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့အဆုံးစီရင် သွားတဲ့အတွက် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ တိဘက် လှုပ်ရှားသူ အသိုင်း အ၀ိုင်းက ပြောပါတယ်။ Yushu တိဘက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ခရိုင်မှာရှိတဲ့ Zadoi မြို့နယ်မှာ စနေနေ့က အဆုံးစီရင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လည်း ဗွီအိုအေကို ပြောပြခဲ့ကြတာပါ။ အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ်ရှိ Yungdung ဆိုသူဟာ တိဘက်ရိုးရာ ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ပြီး တရုတ်ဈေး ဆိုင်တွေရှေ့ ဖြတ်လျှောက်ပြီး မီးရှို့သတ်သေခဲ့တာလို့ Yushu ဒေသခံတွေနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒရမ်ဆလာအရပ်က တိဘက် အရေး လှုပ်ရှားသူ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပါတယ်။
မသေမီမှာ တိဘက်ဒေသ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ တရုတ်အစိုးရဟာ တိဘက် ဘာသာရေးကို ဖျက်ဆီးနေတယ် ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ အော်ဟစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အခုသေဆုံးမှုနဲ့ပါဆိုရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကတည်းက တရုတ်နိုင်ငံ တိဘက်ဒေသမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြတဲ့ လူပေါင်း ၅၂ ယောက်အထိ ရှိသွားပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ ၄၂ ယောက် ကတော့ သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း အဝေးရောက် တိဘက်အစိုးရက ပြောပါတယ်။
တစ်ခန်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
တစ်ခန်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုတစ်ခု တာမွေမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၂၉ရက်နေ့၊ နံနက် ၃နာရီ ၂၀မိနစ်အချိန်တွင် အမှတ် ၁၅၈၊ ၅လွှာ(ခ)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ပျားရည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်တွင် လူသတ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းအရ တာဝန်ရှိသူများမှ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ရန်နိုင်ဝင်း၊ ၂၅နှစ် ၊ Golden Hill Tower အ၀တ်လျော်ခန်းဝန်ထမ်း၊ အမှတ် ၁၅၈၊ ၅လွှာ(ခ)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ပျားရည်
ကုန်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် နေသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
သေဆုံးသူ ရန်နိုင်ဝင်း၊ ၂၅ နှစ်၊ Golden Hill Tower အ၀တ်လျော်ဝန်ထမ်းသည် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ အဆိုပါတိုက်ခန်းတွင် အတူငှားရမ်း နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး Golden Hill Tower တွင် ၀န်ထမ်းများအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူ စည်သူအောင်၊ Golden Hill Tower စားဖိုဆောင် ၀န်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်သူနှင့် ခင်မင်သူများဖြစ်သဖြင့် မကြာခဏ လာရောက်အိပ်လေ့ရှိကြောင်း၊
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၃နာရီ ၂၀မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် ဦးဝဏ္ဏစိုး၊ ၄၀နှစ်၊ Golden Hill Tower လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းသည် နေအိမ်တိုက်ခန်းတွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကျော်ဇင်နှင့် အတူရှိနေစဉ် သူငယ်ချင်းဖြစ် သူ ရန်နိုင်ဝင်း၊ ၂၅နှစ်၊ Golden Hill Tower အ၀တ်လျော်ဝန်ထမ်း၊ ရောက် ရှိလာပြီး အကျီချွတ်လျက် ဘောင်းဘီတိုဖြင့်အိပ်နေသည် ကိုတွေ့ပြီး ခဏ အကြာ စည်သူအောင်၊ Golden Hill Tower စားဖိုဆောင်ဝန်ထမ်း ရောက်လာ၍ ဦးဝဏ္ဏစိုးမှ တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး စည်သူအောင်မှာ ခေတ္တအိပ်နေခဲ့ကာ မိနစ်အနည်း ငယ်အကြာတွင် စည်သူအောင်မှ ''မင်းလူပါးဝနေတာ ကြာပြီ'' ဟုပြောဆိုကာ ပက်လက်အိပ်နေသည့် ရန်နိုင်ဝင်း အား အပေါ်မှခွကာ ဓားဖြင့် တစ်ချက်ထိုး လိုက်သည်ကို မြင်သဖြင့် ဦးဝဏ္ဏစိုးမှ ၀င်ရောက်ဟန့်တားရာ စည်သူအောင်သည် ထပ်မံ မထိုးဖြစ်တော့ဘဲ ဓားချကာ မီးဖိုခန်း ဘက်သို့ပြေးသွားပြီး ပုလင်း အား ယူရန်ပြုလုပ်သဖြင့် ဦးဝဏ္ဏစိုးမှ ၀င်ရောက်ဟန့်တားရာ စည်သူအောင်သည် အ၀တ် အိတ်အားယူကာ အိမ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းသွားကြောင်း၊ ဦးဝဏ္ဏစိုးမှ ရန်နိုင်ဝင်းအားကြည့်ရာ ၀ဲဘက်ရင်အုံတွင် ထိုးသွင်းဒဏ် ရာတစ်ချက်ရရှိကာ သွေးထွက်နေပြီး ခဏအကြာတွင် ရန်နိုင်ဝင်းမှာ သေဆုံး သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ စည်သူအောင်အား ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ ည ၇နာရီ ၃၀မိနစ် အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ၄င်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စကားများရာ မှ လူသတ်မှုကျူး လွန်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုအား တာမွေရဲစခန်း(ပ)၁၁၅၉ /၂၀၁၂ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၂ဖြင့်အမှုဖွင့်ပြီး အမှုစစ်မှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ တစ်နှစ်နှင့် သုံးလ ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ် နေသော်လည်း အဆင်မပြေသေးပေ။ လတ်တလော အနေအထားတွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လျက် ရှိနေသောကြောင့် ယင်းတိုက်ပွဲ အခြေအနေများနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေ ဖြစ်နေရသည့် အခြေအနေများကို ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(ကေအိုင်အေ)၏ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် The Voice Weekly တို့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ခဲ့သည်များမှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
Voice : အစိုးရတပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတာ တစ်နှစ် ကျော်နေပြီ။ တချို့ကလည်း ခုဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲ က ခွဲထွက်ရေး အတွက် တိုက်နေ တယ်လို့လည်း ပြော ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ နားလည် ထားတာက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်း တယ်လို့ ကြားထားပါ တယ်။ အဲဒီအပေါ် မှာ တိကျတဲ့ သဘော ထားကို ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျ။
GGM : ကချင်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံလို့ ပေါ်ထွက်လာ အောင် အစကတည်းက ကြိုးစားတဲ့ နေရာမှာ ကချင်တွေ ပါခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက် ရေးလို့ ပြောတဲ့ အထဲမှာ ကချင် မပါဘူး။ဦးအောင်မင်းကိုလည်း ပြောခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော် တို့ ပြောခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီ၊ သိပ်ပင်ပန်း နေပြီလို့ နောက်ခဲ့သေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြည်ထောင်စု ခွဲထွက်ရေး လို့ နားလည် ကြတယ်။ ဒါက ကချင်တွေ ရဲ့ Concept ပဲ။ ခု ပြောနေကြတာ လည်း ပြည်ထောင်စု အရေးပဲ။ ကေအိုင်အိုက ဘယ်လောက်တောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်းနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီကို လက်ခံမယ်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေး၊ ဒီမှာ မူထိတယ် ဆိုပြီး စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းရေး ပျက်ခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပဲ။ ၁၉၉၄ တုန်းက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စေ့စပ်ပွဲ လုပ်တယ်။ နိုင်ငံထဲမှာ အခြေခံ ဥပဒေ တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းတဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ရအောင်လို့ ပြောရင် လက်မခံခဲ့ဘူး။ အစိုးရနဲ့ လုပ်။ သူတို့က အာဏာ သိမ်းထားတဲ့ တပ်မတော် အစိုးရလို့ပြောတယ်။ ၂၀၀၈ ကုန်ခါနီး မှာ အသွင် ကူးပြောင်းရေး အတွက် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဖို့ပြောတယ်။ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ဆိုတာက နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရ ဖြစ်တယ်။ အသွင်ကူးပြောင်း ရေးနဲ့ Road Map က ဘယ်လို ချိတ်ဆက်မှု ရှိသလဲ မေးတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဆိုတာ နိုင်ငံတော် စီမံကိန်း ဆိုတာ သဘောပေါက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်က ကေအိုင်အေ တပ်တစ်ခု တည်းကို ပြောနေတာ။ ကေအိုင်အိုမှာ ကျန်း မာရေး၊ ပညာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အစ ရှိတဲ့ဌာန ၁၀ခု ရှိ တယ်။ ကေအိုင်အေ ဆိုတဲ့ စစ်တပ်က ကေအိုင်အိုရဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုပဲ။ တပ်တစ်ခုတည်းကို မပြောဘဲနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံး ကိစ္စ ပြောပါ။ ဘယ်လောက်ထိ ညှိခဲ့လည်း ဆိုရင် ပူးပေါင်းလို့ရတာ ပူးပေါင်း မယ်။ ဥပမာ-ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေပေါ့။ နောက် ကေအိုင်အေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် ပေးရင် ဘယ်လောက် ပေးမလဲ မေးတော့ မသိဘူးတဲ့။ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့သူနဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်ကျော် ကို ဖယ်လိုက်ရင် တပ်ရင်း ၃၀ ရနိုင်တယ်၊ ပေးမလား ဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးက ပြီးသွားပြီ။ အဲဒီနောက်မှာ ဦးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း) ဆီကို လိပ်မူ ပြီးတော့ ကေအိုင်အိုက စာပို့ခဲ့တယ်။ ပြည်ထောင်စု စကတည်းက ကချင်လူမျိုး တွေ ပါခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုထဲ တန်းတူရေး ရချင်ပါတယ်။ တပ်မတော် မှာ ဦးစီးချုပ် တစ်ယောက်တည်း ထားမယ် ဆိုလည်း လက်ခံမယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းပေးပါ။ အဲဒီလို ဖွဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ တပ်တွေကို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း သွားမယ်။ နိုင်ငံတော်မှ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်သေးတယ်။ ဘာလို့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်လို့ မရနိုင် ရမှာလဲ။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သဘောထားပါ။
Voice : ဟုတ်ကဲ့။ တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ် ခဲ့တည်းက ညှိနှိုင်း နိုင်ခဲ့ရင် ခုလိုအခြေ အနေမျိုးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လေ့လာသူ တွေကသုံးသပ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဘာ ကြောင့် မညှိနှိုင်း နိုင်ခဲ့တာ လဲခင်ဗျ။
GGM : တိုက်ပွဲတွေ မနှစ်က ဇွန်လ ၉ ရက်မှာ စဖြစ်တာနဲ့ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂နာရီထိ ကျွန်တော် တို့ဘက်က တိုက်မိန့် မပေးသေးဘူး။ ဦးအောင်သောင်း တို့၊ ဦးသိန်းဇော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးနေတုန်း။ ကြာရင် မလိုလားအပ်တာ များလာမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတိုက်ပွဲ အမြန်ရပ်ဖို့ သူတို့ သမ္မတဆီ တင်ပြမယ် ဆိုတော့ သဘော တူတယ်။ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လယ် နှစ်နာရီ အထိ စောင့်တယ်၊ သဘောတူညီမှုမရ ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ၁၄ ရက်နေ့က စပြီး ကျွန်တော်တို့ကလည်း တိုက်မိန့်ပေး လိုက်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေ စလုပ် ကတည်းက တိုက်ပွဲတွေ စဖြစ်တာပဲ။ အပစ်အခတ် ရပ်ဖို့အတွက် လက်မှတ်ထိုး ရအောင်လို့ ပြောတယ်။ တခြားနိုင်ငံ တစ်ခုကို သက်သေထားပြီး လုပ်ပေးပါ ပြောရင်လည်း အစိုးရကသိက္ခာရှိသေး တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမပါနဲ့၊ ပြည်တွင်း ပြဿနာပဲတဲ့။ ဒါဆို ကတိတစ်ခုပေးပါ။ အစိုးရက နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုက်ပွဲ တွေအားလုံး ရပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကို ၁၅ ရက်အတွင်း ကြေညာပေးပါ။ ဒါလည်းမဖြစ်နိုင် ဘူးဆိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲက ၃ ကြိမ်မှာ ပြီးသွားရောပဲ။ ခု ပထမအဆင့် အနေနဲ့ လုပ်ရမှာက တိုက်ပွဲတွေ လျှော့ချရေး။ ခုတပ်တွေ ရောနေတယ်။ အစိုးရတပ်က ရိက္ခာပို့တာတောင် ကျွန်တော်တို့ တပ်မဟာ ၃ ကိုဖြတ်ပြီးပို့ရတာ။ ခဏခဏ ရိက္ခာ ပို့ခွင့်တောင်းတုန်း။ ကူညီပေးဖို့တော့ စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက် တွေ့တော့ မကျဘူး။ မဟာဗျူဟာအရ နောက်ကျော ရောက်နေတဲ့ တပ်ကို ခွာပေးပါ။ ခွာလိုက်ရင် တိုက်ပွဲတွေ လျော့သွားပါမယ်။ ဒုတိယ အဆင့်အနေ နဲ့ ပင်လုံမှာ ကျင်းပသလို ညီလာခံ ကျင်းပရမယ်။ ဒုတိယ ပင်လုံလည်း မဟုတ်ဘူး။ နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကချင်ကလည်း ကချင်တွေချည်း အစည်းအဝေး လုပ်ရမယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့လည်း လုပ်ရမယ်။ ဘုံသဘော တူညီမှုပေါ့။ လက်တွေ့မှာတော့ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ တပ်တွေရွှေ့ဖို့ ကိစ္စ တွေမှာ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ တပ်ကိစ္စတွေ ပါလာရင် ဆွေးနွေးလို့ မရတော့ဘူး။
Voice : ကေအိုင်အို အနေနဲ့ရော၊ အစိုးရရော တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ငဲ့ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးလို့ မရနိုင်တော့ဘူးလား ခင်ဗျ။
GGM : ခုနက ပြောသလိုပဲ။ ဦးအောင်မင်း တို့နဲ့ တပ်ကိစ္စ ပြောရင် ဆက်ဆွေးနွေးလို့ မရတော့ဘူး။ နောက်တိုက်ပွဲ တစ်နှစ် ကျော်လာတဲ့အထိ တိုက်ပွဲ ကိစ္စကို လွှတ်တော်က ဘယ်လို စဉ်းစားသလဲ။မစဉ်းစားဘူးလား။ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင် ဒီတိုက်ပွဲတွေကို အစိုးရက ခွင့်ပြုလို့ တိုက်နေတာလား။ ဒါတစ်ပိုင်း။ နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောနေတဲ့စကား လွှတ် တော်အနေနဲ့ ဘယ်မှာ ရပ်ပြီး ပြောနေ တာလဲ။ ကချင်ပြည်နယ်က လွှတ်တော် အမတ် ဦးစခုန်တိန့်ယိမ်းက တိုက်ပွဲမှာ လာဦးစီး နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ရှိတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လိုခွင့်တောင်းပြီး စစ်ပွဲ ဦးစီး ရသလဲ။
Voice : လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (RFA)မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ပေးတဲ့ ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသွားတာ ရှိတယ်။ ကေအိုင်အိုက အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံကို လည်း လက်ခံတယ်၊ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဦးစီးချုပ် တစ်ယောက်တည်း ရှိရမယ် ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အစိုးရလူကြီးတွေကို ကေအိုင်အိုက မယုံကြည်ကြဘူးလို့ ပြောထားတာ ရှိပါ တယ်ခင်ဗျ။ ကေအိုင်အိုရဲ့ သဘောထားက လက်ရှိ အစိုးရအပေါ် ဘယ်လို သဘောထား ရှိသလဲခင်ဗျ။
GGM : အဓိက လူမဟုတ်ပါဘူး။ မူပါ ပဲ။ အရင် ကတည်းက အခြေခံ ဥပဒေပဲ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ တခြားသူ ဥက္ကဋ္ဌ တက်လုပ်လည်း ဘာမှမပြောင်းဘူး။အဓိကက ဥပဒေပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကေအိုင်အို အမည်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ် ရမလား လို့မေးတော့ နေပြည်တော်ကို လှမ်းမေး ကြတယ်။ ရတယ်တဲ့။ နောက်နှစ်ရက် ကြာတော့ မရဘူး ဖြစ်ပြန်တယ်။ကျွန်တော် တို့က ဒီဂရီကုန်တဲ့အထိ ညှိပေးခဲ့ပြီးပြီ။ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်။ ဒုတိယသက်တမ်း မှာမှ ဝင်မယ်။ ပထမ သက်တမ်းမှာ ဒီပုံစံ မှာပဲနေမယ်။ ၁၇ နှစ်လုံးလုံး ဆွေးနွေးဖို့ စောင့်နေခဲ့တာ။ ခုလက်မှတ်ထိုးရုံနဲ့ တော့ငြိမ်းချမ်းရေး ရမသွား နိုင်ဘူး။သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးတာက စေ့စပ် ကြောင်း လမ်းတာနဲ့တူတယ်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးတာက မင်္ဂလာဆောင်တာ နဲ့တူတယ်လို့တောင် ဦးအောင်မင်းကို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
Voice : ခုလက်ရှိက ဒုက္ခသည်တွေ လည်း တစ်သိန်းနီးပါး ရှိနေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ဖားကန့်မှာ လက်နက်ကြီး ထိပြီး ကျောင်းသူလေး သေဆုံးသွား ရတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါသလား။
GGM : ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆုံး ဖြတ်ချက်တွေကို လူထု အစည်းအဝေးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခု တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ လူထု ဒုက္ခရောက်တာ မှန်တယ်။ တိုက်ပွဲ မဖြစ်တုန်းကရော ဒုက္ခ မရောက်ဘူးလား။ မြန်မာပြည်က တိုက်ပွဲ မဖြစ်ဘဲ ဒုက္ခရောက် ခဲ့တာပါ။ ကချင်တွေ စိတ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲကြာလာရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာ မယ်၊ ကြာရင် ထိန်းရ ခက်မယ်၊ ဒါကြောင့် တိုက်ပွဲကို အရင် ဖြေရှင်းရမယ်လို့ ဦးအောင်မင်းကို ပြောခဲ့တယ်။ လူထု ဖိအား ပါလာရင် ဆုံးဖြတ်ရ ခက်မယ်။ တိုက်ပွဲတွေများလာရင် လူထုက နာကြည်းမှု တွေဖြစ်လာတယ်။ ဒီလို ပြဿနာတွေ ထိန်းမနိုင်ရင် ခက်မယ်လို့ အစကတည်း က ပြောခဲ့တယ်။ ဖားကန့်မှာ ဖြစ်တဲ့ဟာ ဆိုရင်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကွန့်မင့်ပေး ကြတာတွေကို မယုံနိုင်ဘူး။ မိသားစု တွေလည်း ပေါက်ကွဲကြတာတွေလည်း ပါ တယ်။ မှားပစ်ကြတယ်လို့ ပြောကြ တယ်။ ဘယ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မှားတာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လဲ မယုံနိုင် တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အများကြီးပဲ။ ဗုံးတစ်လုံးကွဲရင် ကျွန်တော်တို့ဆီ ကလား။ သူတို့ဆီကလား ဆိုတာ ကွဲကွဲ ပြားပြားမသိရဘူး။ မှားပစ်ရင်းနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်း ရွာထဲမှာ ဝင်ပစ်သွားကြတာ။ကျွန်တော်တို့ စဆွေးနွေး ကတည်းက မူတစ်ခုချပြီးတာနဲ့ မြစ်ကြီးနားမှာ တွေ့မယ်လို့ တရားဝင် ကြေညာထားပြီး သားပါ။ အခု ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် တို့ပြောတာက ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်က တာဝန် ပေးထားတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့မယ်။ ဒုချုပ်မှ၊ ကာချုပ်မှ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ခုနောက်ဆုံး နေပြည်တော် မှာ ဆွေးနွေးရအောင် ပြောတယ်။ မူ မရှိဘဲ နေပြည်တော်မှာ ဘာသွားဆွေးနွေး မလဲ။ ဘယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးမလဲ။ အဓိက မူတစ်ခုရှာ။ နေရာ အဓိက မဟုတ်ဘူး။ မူပဲ။
Voice : ကေအိုင်အိုနဲ့သာ အပစ် အခတ် ရပ်စဲနိုင်ရင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်လို့ ရပြီလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကေအိုင်အိုက ဘယ်လို မှတ်ချက်ပြုချင် ပါသလဲ ခင်ဗျ။
GMM : ကေအိုင်အို အနေနဲ့က အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး တစ်ခုတည်း မပြောဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ ကတိကို ရချင်တာ။ ကတိမရဘဲနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဘာလုပ်မလဲ။ ပြန်ပစ်ကြမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်မယ့် ကတိတော့ မလိုချင်ဘူး။ ဆွေးနွေး မယ်ဆိုတဲ့ ကတိ မရဘူး။ ၂၀၀၈ ထဲ ဝင်လာပါ ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆက်သွားလို့ မရတော့ဘူး။ သမ္မတရဲ့ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းမှာလည်း တခြား အဖွဲ့အစည်း တွေကို ရည်ညွှန်း ပြောတာပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရည်ညွှန်း ပြောတာ မပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။ သောင်းကျန်းသူ၊ အခွင့်အရေး တောင်းသူလို့ သဘောထား လား။ သောင်းကျန်းသူလို့ သတ်မှတ်ရင် သောင်းကျန်းသူ အနေနဲ့ပဲ သူဖြေရှင်း မှာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ပင်လုံစာချုပ် အပေါ်မှာ ခုလက်ရှိ အစိုးရက ဘယ်လို သဘောထားလဲ မေးတာ ခုထိ အဖြေမရဘူး။ အတူတကွ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်လို့ရတဲ့ ဥပဒေ ပေါ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမယ်။ ခုသမ္မတ ပြောတဲ့ဟာ စာချုပ်ကို ကြည့် လေ။ ခုဟာက ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပဲ။ ဘာမှ တိတိကျကျ မရှိဘူး။ ရှမ်းနဲ့လည်း တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ် တာပဲ။ ဒါကြောင့် အာမခံချက် မရှိဘဲ စာချုပ်ကြီး ချုပ်ပြီး နောက်ဖြစ်လာမယ့် စစ်ပွဲအတွက် ပြင်နေတာမျိုးနဲ့တော့ မရပ်ချင်ဘူး။
ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း အစုန်စက်လှေ တစ်စီးပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်း သုံးထောင် သုံးရာကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိကြောင်းသိရ
စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း အစုန်စက်လှေတစ်စီးပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်း သုံးထောင် သုံးရာ ခုနစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ ကလေးဝမှ စုန်ဆင်းလာသော မြင်းကောင်ရေ ၂၅ တရုတ်အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားသော အစိမ်းနုရောင် စက်လှေတစ်စီးပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၃၃၇၅တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ မုံရွာမူးယစ်အထူးအဖွဲ့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ က တရားခံ ၅ ဦးနှင့် အတူ တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလျား၄၅ ပေ အနံ ၃ ပေခွဲ ရှ်ိ အဆိုပါစက်လှေပေါ်မှ ဆူဒိုအက်ဖ်ဒရင်း အာနိသင်ပါ နှာစေးပျောက်ဆေးပြား ၂သောင်းပါ ဆေးထုပ် ၁၀ ထုပ်ပါသည့် ဆာလာအိတ်တစ်အိတ်လျှင် ၃၆ ကီလိုပါ ၁၄အိတ် ဆေးပြားပေါင်း ၂၈သိန်း စုစုပေါင်းတန်ဖိုး သိန်း ၂၈၀၀ ၊ ဆူဒိုအက်ဖ်ရင်း အာနိသင်ပါ နှာစေးပျောက်ဆေး အဖြူရောင်ပါ ဆာလာအိတ် ၂၇အိတ် ဆေးပြား ၅၄ သိန်းပြား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၅၄၀၀၊ ဆူဒိုအက်ဖ်ရင်းအာနိသင်ပါ နှာစေးပျောက်ဆေး အဖြူရောင်ပါ ဆာလာအိတ် ၂၁ အိတ် ဆေးပြား ၄၂သိန်းပြား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၄၂၀၀၊ ဆူဒိုအက်ဖ်ရင်း အာနိသင်ပါ နှာစေးပျောက်ဆေး အဖြူရောင်ပါ ဆာလာအိတ် ၂ အိတ် ဆေးပြား ၄ သိန်းပြား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၄၀၀၊ ဆူဒိုအက်ဖ်ရင်း အာနိသင်ပါနှာစေးပျောက်ဆေး လိမ္မော်ရောင်ပါ ဆာလာအိတ် ၁အိတ် ဆေးပြား၂ သိန်း ၆ သောင်းပြား တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၂၆၀၊ ဂျပ်ဖာ အတွင်းမှ အက်ဖ်ဒရင်း ဟုယူဆရသည့်၉ ကီလိုဂရမ် အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်ထုပ် တန်ဖိုး၃၁၅ သိန်း တို့ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ၁၃၃၇၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညပိုင်းက ကနီမြို့ နယ် လက်ပံစုရွာအနီးမှာ ဝင်းမနားရဲစခန်းက ရဲတွေနဲ့အတူ မုံရွာမူးယစ်အထူးအဖွဲ့ က ဖမ်းမိတာလို့ သိရတယ်။ စက်လှေပေါ်မှာ တရားခံ ၅ ဦီး နဲ့ အတူ လက်ကိုင်ဖုန်း ၃ လုံး တို့နဲ့အတူ မိတယ်လို့သိရတယ်။ ကလေးဝက စုန်ဆင်းလာတဲ့ စက်လှေလို့ သိရပြီး အိန္ဒိယဘက်က မူးယစ်ဆေးပြားတွေ သယ်ယူမှုတွေ အဖမ်းခံရမှု များတယ်လို့ သိရတယ်။” ဟူ၍ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အဆိုပါအမှုအတွက် ကနီမြို့ နယ် ဝင်းမနားရဲစခန်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် မူးယစ်(ပ) ၁/၁၂ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၅၊၁၆(ခ)၊၂၁ တို့ဖြင့်တရားခံများဖြစ်သော သူရစိုး ခေါ် စိုးကြီး ခေါ် ဇော်ဝင်းကို ၃၄ နှစ်(ဘ-ဦးကျော်စိုး) ဈေးရောင်း ခမိတ်ရွာ တမူးမြို့ နယ်၊ ဆောင်းလင်း ၃၅ နှစ် (ဘ-ဦးတင်မြင့်) တောင်သူ မြို့ မ ၇ ရပ်ကွက်တမူးမြို့ ၊ ကျော်ကျော်ဝင်း ၄၉နှစ် (ဘ- ဦးညွန့် တင်) ဘက်ထရီ လုပ်ငန်းချိုင်ရွာ ကနီမြို့ နယ်၊ မောင်လှိုင် ၃၇ နှစ် (ဘ- ဦးတင်ရှိန်) တောင်သူ ခမိတ်ရွာ တမူးမြို့ နယ်၊ ဖိ်ုးသဲ ၂၅ နှစ် (ဘ-ဦးအေးမြင့်) တောင်သူ ခမိတ်ရွာ တမူးမြို့နယ် တို့၅ ဦးအား အေ၇းယူထားကြောင်း သိရသည်။
စာပေါင်းများစွာ ရေးခဲ့ဘူးပါပြီ။ ရင်နင့်နင့်နဲ့ ရေးရတဲ့ စာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာရေးရတာလောက် ရင်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတာမျိုး မကြုံဖူးသေးဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် အလေးထား အားကိုးရတဲ့ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။ နောင်ကို ဒီလိုခံစားမှုမျိုးနှင့် ဘယ်တော့မှ မရေးရပါစေနှင့်လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မနေ့က VOA အင်တာဗျူးအပေါ် ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ရတော့ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ဦးကိုကိုကြီးရယ်လို့ ရေရွတ်ရင်း ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျနော်တို့ အလွန်လေးစားအားကိုးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုးကို ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အပြင် နောင်လည်း ဆက်ထိခိုက်မဲ့ အလားအလာတွေကို ထပ်တွေ့လိုက်ရတာမို့ မရေးမဖြစ် ရေးလိုက်ရပါတယ်။
အထိကရုဏ်းတွေ စဖြစ်ကတည်းက ဦးကိုကိုကြီးသည် တာဝန်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအနေနှင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးနှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေကို ဒေါင့်စုံက မျှအောင်ကြည့်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွါးနေတဲ့ လူအုပ်စုနှစ်ခုကို ပထမဦးစားပေးအနေနှင့် ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်း အေးငြိမ်းသွားအောင် တိုက်တွန်းရမဲ့အစား ဘက်တစ်ဘက်ကို သွေးမြောက်စေပြီး အခြားတစ်ဖက်ကို သိမ်းကြုံးပြီး ခိုးဝင်လာတဲ့ အခြေအမြစ်မဲ့၊ ရေမျောကမ်းတင်များသဖွယ် ပစ်ပစ်ခါခါပြောခဲ့ပါတယ်။ အထိကရုဏ်းဆိုတာမျိုးဟာ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာ ကောင်းပြီး ဘယ်လောက် တရားလက်လွှတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကို ကုလား-ဗမာ၊ တရုပ်-ဗမာ အထိကရုဏ်းတွေကို ကြုံဖူး၊ ကြားဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြပါတယ်။
သွေးဆူပြီး အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဲဒီလို အထိကရုဏ်းကာလမျိုးမှာ သွေးအေးစေဖို့၊ လူသားတိုင်းနှင့် ထိုက်တန်တဲ့ လူ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေ တန်ဖိုးထားဖို့၊ အပြစ်မဲ့ပြီး အားနည်းတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ခလေးသူငယ် တွေကို အထူးသဖြင့် အကာအကွယ်ပေးဖို့၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်ဆောင်ကြဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေနှင့် တစ်ခွန်း တစ်ပါဒမျှ မဆိုခဲ့ပါဘူး။ မဆိုခဲ့တဲ့အပြင် ဆိုင်လည်း မဆိုင် လိုလည်း မလိုအပ်ဘဲနှင့် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာကြီးကို အတင်းဆွဲသွင်းပြီး တပ်မတော်နှင့် လက်တွဲချေမှုံးမယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းချောက်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီလိုပြောလုံးမျိုးတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကို ဦးကိုကိုကြီးကို လေးစားလျှက် ရှိနေသေးသောကြောင့် ဥပမာဆောင်ပြီး နှိုင်းယှဉ် မဖေါ်ပြရက်ပါဘူး။
ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ်တွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားစွာ လေ့လာနေမိတယ်။ ဦးခင်ရီရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရ ဒုက္ခသည် ခြောက်သောင်းကျော်မှာ ရခိုင်က ရှစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ငါးသောင်းကျော်က ရိုဟင်ဂျာ တွေဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ သွေးချင်းရခိုင်တွေကို အင်မတန်စာနာ နားလည်နေတဲ့ ဦးကိုကိုကြီးဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေနှင့် ရခိုင်က အခြားမွတ်စလင်တွေကို စာနာမှုအပြင် အပိုဆုအဖြစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေထိုင်ကြဖို့ တွေ့တိုင်း ဆုံးမသြဝါဒ ပေးနေတာတွေကိုလည်း အထူးသတိထားမိပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေနှင့် မွတ်စလင်တွေကသာ အထူးဆိုဆုံးမပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဦးကိုကိုကြီး ယူဆနေဟန်တူပါတယ်။
သမ္မတကြီးက ခိုးဝင်လာသူ မရှိသလောက်ရှိပါတယ်လို့ မနေ့တုန်းက ဆိုလိုက်မှ ဦးကိုကိုကြီးက ဧရာဝတီနှင့် သြဂုတ်လ(၁၅) အင်တာဗျူးမှာ “အဆိုပါ အချက်သည် ၄င်းတို့အဖွဲ့ တွေ့ရှိချက်များဖြင့် ထပ်တူဖြစ်၍ ကြိုဆိုကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“သဘောထားခြင်းက မကွာဘူး။ ဆိုတာက ကျနော်တို့ သိထားတာက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်က ၀င်လာတာက များတယ်။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ဟိုဘက်ကမ်းက စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးက ကိုယ့်ထက်တောင် သာတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။”
ဦးကိုကိုကြီး ရခိုင်ကို နှစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အရင်ကတည်းကသိနေတာကို ဘာဖြစ်လို့ မပြောဘဲ သိမ်းထားရတာလဲလို့ မေးခွင့်ပြုပါ။ စောစောပြောရင် မြန်မာပြည်သူတွေ စောစော အမှန်တရားကို သိသွားမှာကို စိုးလို့လား။ တစ်ဖက်အုပ်စုကို အမုန်းတရား နည်းသွားမှာ စိုးလို့လား။ အခု သမ္မတကြီးပြောပြီးမှ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ အမှီလိုက်ပြောရတာလဲ ဦးကိုကိုကြီးခင်ဗျား။
အဲဒီ ဧရာဝတီသတင်းထဲမှာဘဲ ဦးဝင်းတင်က “သမ္မတ အရင်က ပြောတာက အပြင်က ၀င်လာတဲ့သူက အများကြီး ပြောခဲ့တယ်။ အခုတော့ ၀င်လာတဲ့သူက လူနည်းစုလို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ နားလည်တာက အများစု ဖြစ်နေတယ်” မိမိသိခဲ့တာကို သိခဲ့တဲ့အတိုင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောကြားလိုက်တဲ့ ဦးဝင်းတင်နှင့် သိလျှက်နှင့် မြုံထားခဲ့တဲ့ ဦးကိုကိုကြီးပြောတာကို နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားနေမိတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာဘဲ ပြသနာ ဖြေရှင်းပြေငြိမ်းရေးနှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးကို အစိုးရနှင့် ကာယကံရှင် ရခိုင်ပါတီတွေကတောင် အလေးထား ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလမှာ ဦးကိုကိုကြီးက ထပ်ဖေါက်ပြီး ဆန်းဆန်းကပြီး ဖွပြော ပြောလိုက်သေးတာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ အတော်လေး အံ့သြမိရပြန်တယ်။ ဦးကိုကိုကြီးက “သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ပြဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြား ရှိပြီးသား တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုးအမည်ကို ခံပြီးတော့ မရိုးမဖြောင့်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ကြိုးစားတာမျိုး နောက်တခါ သီးခြား နာမည်တခု ဖန်တီးပြီးတော့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားတာမျိုးကိုသာ ကျနော်တို့က ထောက်ပြပြောဆိုနေတာ။”ပြောလိုက်ပြန်တယ်။
ဘာရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခုလိုပြောလိုက်တာပါလဲ ဦးကိုကိုကြီးခင်ဗျာ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ အထိကရုဏ်းသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံသားများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် အစီအစဉ်ရှိရှိ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်၊ မှူးဇော်ကဆို လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမားတွေ အုပ်စုလိုက် ကျူးကျော်မှုကြောင့် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီး စဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ် ဦးကိုကိုကြီး။ နိုင်ငံသားနှင့် ခိုးဝင်သူအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဖြစ်ရတဲ့ ပြသနာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံသားဘဲဖြစ်သလား။ တိုင်းရင်းသားကော ဖြစ်သလားဆိုတဲ့ အငြင်းပွါးမှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပြသနာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်း (လူဝင်မှုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီပြောအရဆိုရင် တစ်အိမ်ထဲနေ ညီအစ်ကိုချင်း အချင်းများကြတဲ့ကိစ္စ) ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာစုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ မလိုတဲ့အပြင်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပညာရေးအတွက် ရခိုင်အမျိုးသားတွေနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မဲ့ကာလမှာ ဘာကြောင့် တိုင်းရင်းသားကိစ္စကို ပိုမရှုပ် ရှုပ်အောင် ဆွဲသွင်းရပြန်ပါသလဲ။ ရှင်းလာတော့မဲ့ ပြသနာကို ပြန်ရှုပ်သွားအောင်၊ ဒီတမီးငြိမ်းမယ် မကြံသေးဘူး နောက်တမီး ကူးအောင် မလိုအပ်သေးဘဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြိုမစဉ်းစားဖို့ တောင်းပန်ပါရစေ ဦးကိုကိုကြီး။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ မွတ်စလင်လူများစုကြီးကိုသာ ရေနစ်ရာ ဝါးကူထိုးသလို အစားအစာ မရောင်းရ၊ အဆက်အဆံ မလုပ်ရ။ အလုပ်အကိုင် မပေးရ။ ဆေးဝါး မပေးရ။ အကူအညီ မပေးရဆိုတဲ့ ကြေညာချက်တွေကို အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးတွေ၊ တံဆိပ်တုန်း အမျိုးမျိုးတွေနှင့် တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုး ပလူပျံအောင် ထုတ်ပြန်နေတာ၊ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖေါ်နေတာ၊ လူသားချင်း စာနာစိတ်နှင့် အကူအညီပေးမိတဲ့ လူသားဆန်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အဲဒီအစွန်းရောက်တွေကဘဲ လူပုံလယ်မှာ အရှက်ရအောင် အပြစ်ဒါဏ်တွေ ပေးနေတာကိုကော ဦးကိုကိုကြီးရဲ့ ရခိုင်ပြည်ခရီးစဉ်မှာ မသိခဲ့ပါဘူးလို့ ဆိုရဲလား။ စဉ်းစားပါဗျာ။ ဒါကို သိလျှက်နှင့် ဘာဖြစ်လို့ မကန့်ကွက်ရပါသလဲ။ မှန်တယ်ထင်လို့ မကန့်ကွက်ရတာလား။ အမျိုးသားရေးမှာ ဆားများလို့ မရသလို ဆားနည်းလို့ မရဘူးလို့ ဦးကိုကိုကြီး ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆားနည်းရင် တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်သလို ဆားများသွားရင် လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်(Rascisim) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားကို မလို မပို ပုံမှန်လေးထည့်ဖို့ သတိပေးပါရစေ ဦးကိုကိုကြီး။
ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းက သြဂုတ်(၈)၊၂၀၁၂ခု ရခိုင်ပါတီနှစ်ခုနှင့် အစိုးရဆွေးနွေးပွဲမှာ “ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ”ကို ပြောခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဌက “ဆက်မလုပ်ကြရန်၊ လုပ်ရင်တော့ အရေးယူမည်”လို့ ပြောလိုက်ပါပြီ။ တစ်ကယ်တော့ RNDP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဦးအေးမောင်နှင့် သူ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အခါ ပါလက်စတိုင်းတွေကို လုပ်(မောင်းထုတ်၊ သတ်ဖြတ်)သလိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို လူသိရှင်ကြား ပြောထား၊ ထုတ်ပြန်ထားတာတွေက အီလက်ထရောနစ်ခေတ်မှာ အထင်ကရ အထောက်အထားတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဦးကိုကိုကြီးလို ထင်ရှားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက သိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ တော်ကြာ သမ္မတကြီးက အစွန်းရောက်တွေကို အရေးယူတဲ့အခါကျမှ ကျနော်သိထားတာနှင့် အတူတူဘဲဆိုပြီး နောက်ကလိုက်ပြောရတာမျိုး ထပ်မဖြစ်ရလေအောင် အဲဒီရခိုင်ပါတီတွေကို ဦးကိုကိုကြီးက ဆိုဆုံးမတာတွေကို အချိန်သိပ်မနှောင်းခင် အမြန်လုပ်ထားဖို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မယားဖြစ်သူမှ တံပိုးနှင့်ရိုက်ကာ နှင်ချသဖြင့် ဦးဂမ္ဘီရ ဘုန်းကြီးပြန်ဝတ်ကာ ဒုတိယ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလုပ်မည်
မယားဖြစ်သူမှ တံပိုးနှင့်ရိုက်ကာ နှင်ချသဖြင့် ဦးဂမ္ဘီရ ဘုန်းကြီးပြန်ဝတ်ကာ ဒုတိယ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး လုပ်မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ဦးဂမ္ဘီရ ခေါ် ဦးညီညီလွင်သည် ၂၀၁၂ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီခန့်က ပေါက်မြို့နယ်၊ အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်ရှိ လေသာကျောင်းတွင် လူဝတ်လဲပြီး၊ ညနေ ၃ နာရီတွင် ပေါက်မြို့၊ အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်ရှိ ဦးလှကျော်၊ ဒေါ်တင်စိန်တို့ သမီး မပပ၀င်းအား သွားရောက်တောင်းရမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတောင်းရမ်းချိန်မှာ ဦးညီညီလွင်မှ “ ငါလူထွက်ရင် ငါ့ကို လက်ထပ်မယ်လို့ နင်ပြောထားတာ၊ ခုငါ နင့်ကို လက်ထပ်ဖို့ လူထွက်လာပြီ၊ ဒီမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် စရိတ် ” ဟုပြောဆိုကာ ငါးထောင်တန်အုပ်များကို ပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပပ၀င်းမှ “ ရှင်နှင့်ကျမ ပတ်သတ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြန်သွားပါ ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ဦးညီညီလွင်မှ အတင်းအကြပ်လက်ထပ်ရန်ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် မပပ၀င်းမှ အနီးရှိ ရေထမ်းပိုးနှင့် ကောက်ရိုက်လိုက်ရာ ခေါင်းကွဲသွားခဲ့သည်။
ယခုအခါ ဦးညီညီလွင်သည် လေသာကျောင်းတိုက်တွင် နေထိုင်ရင်း ဆေးကုသမှုခံယူနေရာမှ ကျန်းမာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မကြာမီ အချိန်အတွင်း ရဟန်းဘောင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ကာ မာတုကာမ ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ဒုတိယ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဆက်လုပ်မယ်လို့ သတင်းရရှိသည်။
မြောက်ပိုင်း ABSDFလူသတ်ပွဲ အကြောင်း တစေ့တစောင်း - ၃
Posted by drmyochit Monday, October 01, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
ရက်လောက်ကထင်ပါတယ်။အလံတိုင်ကုန်း(ထောင်ကုန်း)အပေါ်မှာပဲအသစ်ဆောက်ထားတဲ့တဲ(နောက်ပိုင်း ရင်းမှုး အောင်ဆွေဦး ရဲ.တဲ )ထဲမှာသတ်မည့်စာရင်းထဲထည့်သင့်မထည့်သင့်အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်အချခံရမဲ့ သူတွေကို သံချောင်းကခေါ်တွေ.ပါတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ခေါ်တွေ.တာလည်းတော့အတိအကျမသိပါဘူး။ခေါ်ပြီးအမေးခံခဲ့ရသူတွေရေးကြပါအုံး။ ကျွန်တော်သိတာက ကျွန်တော်ရယ်၊ လှမြင့်ခေါ်ဇော်ကြီးရယ်၊ မောင်မောင်ကြွယ်ရယ်၊ကျွန်တော်ကစပါ. မယ်။
အိမ်ထဲဝင်သွားတာနဲ.သံချောင်းကအစောင့်တွေကို "ငါ ကိုညီနဲ.လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောချင် တယ်ကွာ၊ မင်းတို.အပြင်ဘက် ထွက်ကြဆိုတာနဲ.စပါတယ်။ကော်ဖီတိုက် ပါတယ်။ဆေးလိပ်တိုက်ပါ တယ်။မီးဖိုဘေးမှာ ရေနွေးသောက်ပြီးဇိမ်နဲ.စကားပြောရတာပါ။သံချောင်းကမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းတွေကိုဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောနေပြီးမှဇတ်ကနဲ. "ကိုညီညီ ခင်ဗျားထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်မှန်းကျွန်တော် သိပါတယ်။ကျွန်တော်တို.ဗျာ တယောက်နဲ.တယောက်မန္တလေးမှာကတည်းကသိကြတာ…… ကျွန်တော် က CS မှားနေပြီ၊ကျွန်တော်က စစ်သားတယောက်ပါ၊မန္တလေးမှာ CS သိခဲ့တာဆိုတာ အပေါ်ယံပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝအမှန် မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီ တုန်းကအရာရှိမဖြစ်သေးဘူးပေါ.ဗျာ။ သူက ခင်ဗျားမကြောက်ပါနဲ.၊လီမ်နေစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုအားလုံး ပြောလို.ရပါတယ်။ကျွန်တော်က "မဟုတ်ဘူး၊ CS ကိုရော ABSDF ကိုရော ကျွန်တောထပ်မညာချင်ပါဘူး။သူက ခင်ဗျားတို.တီးဝိုင်းအဖွဲ.ထဲက ခင်ဗျားထောက်လှမ်းရေးမှန်းဘယ်သူတွေသိသေးလဲ၊ ဘယ်သိမှာလည်းဗျာ ကျွန်တော့်အလုပ်ကိုကလျှို.ဝှက်အလုပ်ဥစ္စာ၊အားလုံးသိကုန်လို.ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ၊ ဝင်းဗိုလ်ကခင်ဗျားအီမ်ဘေးတင်နေတာ သူရောမသိဘူးလား?
မပြောတက်ဘူး၊ဒါပေမဲ့မသိနုင်ဘူးဗျ၊ဒါမှမဟုတ်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာနဲ.တူတယ်။ဒီတော့သူက ဟုတ်ပြီလေ၊ ခင်ဗျား သူလျှိုတယောက်ဆိုရင်ပြီးတာပါဘဲ၊အေး မဟုတ်ပဲနဲ.ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ပြောနော် ကျွန်တော်အကုန် လုပ်ပေးလို.ရတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော၊လူတွေအများကြီးဖမ်းထားတာဆိုတော့တချို.မှားဖမ်းတာလည်းပါချင်ပါမှာပေါ.။တကယ်လို.ခင်ဗျားထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ရင်ကျနော်လွတ်ပေးလို.ရတယ်။ ကျွန်တော်က "မလုပ်ပါနဲ.ဗျာ-ကျွန်တော်ကျောင်းသားတပ်မတော်ကိုထပ်ပြီးမလီမ်ပါရစေတော့၊နောက် CS ကျွန်တော်ကိုခင်နေတာကို လည်းအခွင့်ကောင်းမယူချင်ပါဘူး။အခုလိုသဘောထားကြီးပြီးမသတ်ပဲထားတာကိုကကျေးဇူးကြီးလှပါပြီ။နောက်စကား တွေဆက်ပြောဖြစ်ကြပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးပြန်ခါနီးပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပါအုံး၊"ကဲ ကိုညီညီ ခင်ဗျားတကယ်ကိုရိုးသားတာသိရလို.ဝမ်းသာပါတယ်။ခင်ဗျားရိုးသားတော့အသက်ရှည်တာပေါ.ဗျာ; တဲ့ အဲဒီလီမ်လည်မှုက ကျွန်တော်အသက်နဲ.နောက်မန္တလေးကလိုက်လာပြီး AB ထဲမှာအကျယ်ချုပ်နဲ.နေ နေရတဲ့ကျွန်တော့်အကိုရဲ.အသက် လူ ၂ ယောက်ရဲ.အသက်ကိုကယ်ခဲ့ တာလို.ပြောလို.ရပါ တယ်။ဝန်မခံလို.ရိုက်သတ်ခံရတဲ့ အေးကျော်တို.၊ကျော်ဌေးတို.၊ပြည့်စိုးနိုင်တို.၊ခင်မောင်စိုးတို.၊အကြွေးတောင်းမိလို. ရင်ကျန်းထမင်းဆိုင်ကခေါ်လာပြီးအသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ရာကွက်ဘိုင်တို. ကိစ္စတွေကိုကြည့်ပါ။ ဝန်မခံလို.အသတ်ခံ ခဲ့ရတာပါ။နောက်ယုံပြီး DR နိုင်အောင်တို.ကိုအမှန်ပြောပြလို. အရိုက်ခံရတဲ့ ကိုသိန်းထွန်း အကြောင်းဖတ်ပြီး သားဖြစ်မှာပါ။သံချောင်းကျွန်တော့်ကိုစစ်သလိုမျိုး နိုင်အောင်နဲ.အောင်နိုင်တို. ကျွန်တော့်ကိုထပ်လုပ်ကြပါ သေးတယ်။အလကားနေရင်း သွေးဆာနေပြီးသတ်ရမဲ့အကွက်ချောင်းနေတဲ့သူတွေပါ။
ဇော်ကြီးက ထမင်းစားနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုလာပြောပါတယ်။အစ်ကို "ကျွန်တော်လွတ်တော့မှာ" ဟေ ဘာလို.လဲ ကွ သံချောင်းကမေးတော့ ကျွန်တော်ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။သူက သေချာနားထောင်ပြီး မင်းကိုငါလွတ်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ ၃-၄ ရက်လောက်တော့ဟန်မပျက် နေအုံးဆိုပြီးပြန်ပို.ထားတာ။ညနေကျတော့ မှားအဖမ်းခံရတဲ့ဇော်ကြီးဆိုတာမင်းလားကွဆိုပြီး အကွဲအပြဲ လာရိုက်သွား တာကြပါတယ်။ ၁၅ ယောက်အသတ်ခံရတဲ့အုပ်စုမှာပါသွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ရက်မှာ အိမ်သာသွားရင်းသူကပြောပါတယ်။အစ်ကိုရေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး သံချောင်းကိုအခြေအနေ အမှန်တွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ.ကျွန်တော်သိသမျှ ကျန်သူတွေလည်း တယောက်မှ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။တော်လှန်ရေးမသေစေချင်ရင် ဒီကိစ္စပြတ်အောင် ရှင်းပါလို.ပြောလိုက်တယ်။ မင်းကွာ မိုက်လိုက်တာ …မတတ်နိုင်ဘူး ကျွန်တော်လည်း စိတ်မထိန်းနိုင်လို. …..
မောင်မောင်ကြွယ် ၁၅ ယောက်ထဲမှာ အခုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် DR နိုင်အောင်တို.အုပ်စု ကျေနပ်အောင်နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ. comment ဝင်ရေးနေတဲ့သူတွေ ၊ွ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို.အတွက် အဖြစ်မှန်ကို တိုက်ခိုက်နေသူတွေသိလောက်ပါပြီ။
ဆမား ညီညီ ၂၂-၆-၂၀၁၂
သေနတ်ကို မကြောက်၊ ကြည်ဆံ မှ ကြောက်သည့် လေးဂွ သမားများ
ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့က အင်းလေလံကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့နယ်ရှားခဲရွာတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အငြင်းပွားမှုနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၂ ဦးရှိသည်ဟု ပုသိမ်မြို့မှ ရရှိသည့် သတင်းအရ သိရသည်။
ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားသည့် အင်းဖျက်ဆီးမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရသူ ၄ ဦးထဲမှ ကိုတလုပ် ခေါ် ကိုဝင်းနိုင်က တိမ်းရှောင်နေရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကာ အင်းဝန်ထမ်းတဦး၏ ဇနီးကို နေအိမ်ပေါ် တက်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟု ရှားခဲကျေးရွာသား တဦးက ပြောသည်။
အင်းဝန်ထမ်းဇနီးဖြစ်သူမှာ ဖူးရောင်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးနောက် အင်းလေလံ ရထားသည့် ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ငါးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်း ၂၀ ခန့်က ကိုဝင်းနိုင်ကို ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ကြသဖြင့် ကိုဝင်းနိုင်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု ယင်းရွာသားက ပြောပြသည်။
ယင်းအဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီးနောက် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် နှင့် လုံခြုံရေးရဲများကို ၎င်းတို့ ကျေးရွာသား သေဆုံးသွားသည်ကို မကျေနပ်ကြသည့် ရှားခဲရွာသား ၁၅၀ ခန့်က တုတ်၊ ဒါးများဖြင့် အကြမ်းဖက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ဦးခန့်မှ ဝင်ရောက် တားဆီးရာ လူအင်အားခြင်းမမျှသဖြင့် ဒုတ်များ၊ လေးဂွ များ ကိုင်ဆောင်ထားသော ရွာသား ၁၅၀ ကျော်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အနီးကပ် ပစ်ခတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သေနတ် ကို မိုးပေါ်ထောင် ပြီး နှစ်ချက် ဖောက်ခဲ့သော်လည်း သေနတ်ကို မကြောက်၊ ကြည်ဆံ မှ ကြောက်သည့် လေးဂွ သမားများ က "မပစ်ရဲပါဘူးကွာ မိုးပေါ်ပဲထောင် ဖောက်ရဲတာပါ" ဟု ဆိုကာ အနီးကပ် လေးဂွနဲ့ ပစ်ခတ် ကြသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကာကွယ် ပစ်ခတ်ရာတွင် ရွာသား ၁ ဦး သေဆုံးကာ အခြားတဦမှာလည်း ဆေးရုံရောက် ပြီးနောက် သေဆုံးသွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူ ၃ ဦးမှာ ကိုတလုပ်ခေါ် ကိုဝင်းနိုင်၊ ဦးကြည်သိန်း (၂၉ နှစ်) နှင့် ကိုကျော်စန်းဝေ (၂၃ နှစ်) တို့ဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရသူ ၂ ဦးမှာမူ ယမန်နေ့အထိ ပုသိမ်ဆေးရုံတွင် တင်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ၀န်းကျင်က ရှားခဲရွာမှ အင်းလေလံ ရရှိသည်ဟု နားလည်ထားရာမှ ငွေသွားပေးသွင်းသည့်အခါ ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီးပိုင် ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ငါးထုတ်လုပ်ရေးက သာ အင်းလေလံရရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည့် နောက် ကျေးရွာနှင့် ကုမ္ပဏီအကြား မကျေနပ်မှုများ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာသည်ဟု ကျေးရွာသား များက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေအရ အင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် မိမိပိုင်လယ်မြေများရှိ ငါးကို လယ်ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖမ်းဆီးခွင့်မရှိသည့် အချက်က အင်းလေလံရသူနှင့် လယ်လုပ်သူ ရွာသားများအကြား မကြာခဏ အငြင်းပွားမှု၊ လယ်ထဲတွင် ငါးဖမ်းသူများ အဖမ်းဆီးခံရမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
ယခုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယမန်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးချုပ်၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးတို့ ရှားခဲကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
မြောက်ပိုင်း ABSDFလူသတ်ပွဲ အကြောင်း တစေ့တစောင်း - ၂
ထောင်ထဲမှာအခြေအနေကသိသိသာသာကြီးကိုပဲပြောင်းနေပါတယ်။မလိုအပ်ရင်ဘယ်သူမှစကားမပြောကြဘူး။အထဲမှာအသံအကျယ်ဆုံးကမျိုးဇော်နဲ.ဝင်းမြင့်တို.နှစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။ "မအေလိုးတွေ တွေ့လား၊လက်ဖြတ်လာတာ၊ မင်းတို့လည်းသေ
မယ်၊သတိထားကြ "ပြီးတော့မျိုးဇော်ကချိုကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ပြီး "မင်းရိုးရိုးသားသားဖြေ ကြားးလားမင်းတို.လို ကောင်တွေ ကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာ၊။ ဝင်းမြင့်ကလည်း ထွန်းအောင်ကျော်ကို ကြီမ်နဲ့ဝင်ရိုက် တယ်။မင်းလက်လည်းဖြတ်ပြစ်မယ်။
နားလည်လား လို့ကြီမ်းပြီး ထွန်းအောင်ကျော်ဘေးက တယောက် နှစ်ယောက်ကိုလည်းဝင်ရိုက်တယ်။ အားလုံးငြီမ်နေကြတယ်။
နောက်တနေ့ ၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၁ ရက် ပုံမှန်အလုပ်ဆင်းတဲ့သူတွေအလုပ်သွားလုပ်ကြတော့ ကျနော်နဲ.အတူတူနေမ ကောင်းတဲ့သူတွေကျန်ရစ်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို.ကို တောင်ကုန်းပေါ်မှာအပြင်ထုတ်ပြီး ထင်းခွဲခိုင်း တယ်။ထင်းခွဲနေ တုန်းမှာ ဗိုလ်ဂွန်မော်(ယခု ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် K I A )ရောက်လာပြီး ကိုညီညီ ခင်ဗျားခေါင်းမာတယ်နော်၊ အခြောင်သေလီမ့်မယ်။
ဘယ်လိုလဲကျနော်ပြောတာစဉ်းစားမလားတဲ့၊ကျနော်ရီပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျော်နိုင်ဦးနဲ့အတူအခြားအဖွဲ့က နှီးဖြာနေတယ်။ကျနော်တို.ကထင်းခွဲနေရတယ်။ကျော်နိုင်ဦးကခြေထောက်ယောင်နေတာနဲ့တူတယ်။ကျနော်ထင်း ကိုကြိုးစားခွဲ ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျနော်ထင်းခွဲတာလုပ်နေကြလူတွေလိုမကျွမ်းကျင်တာတော့အမှန်ပါပဲ။အဲဒီအချိန်မှာ ကွန်မန်ဒို အဖွဲ့က လက်သီးက
ဟေ့ကောင်ညီညီ မင်းဘဝအတွက်ငါ သနားတယ်။မင်းထင်းလဲဖြောင့်ဖြောင့်မခွဲတက်၊နှီးလဲ မဖြာတက်၊မင်းထဝကို မင်းဘယ်လို
ရင်ဆိုင်မလဲ၊ ကျနော်က ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ကြိုးစားပါမယ်။ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြား တောခေါင်းတွေသဘော ကောင်းနေ တယ်။
ကျနော်တို့ကိုစုပြီးဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပေးထားတယ်။စကားတောင်နဲနဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ရေနွေးသောက်ခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သတိတော့ထားနေရတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးကအချိန်မရွေးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ညနေ ထောင်ထဲမှာထမင်းကျွေးအပြီး မအိပ်ခင်သီချင်းဆိုခိုင်းတယ်။တောခေါင်းတွေရဲ့စကားအသုံးအနှုန်းကိုကြည့်ရတာ အခြေနေက လုံးလုံး မကောင်းတော့ဘူး။ ချိုကြီးအမှတ်တရသီချင်းဆိုကွာ၊ထွန်းအောင်ကျော် အမှတ်တရသီချင်း ဆိုကွာ..ဆိုတဲ့စကား တွေကြောင့်ပါ။
ဒီနေ့ ထွန်းအောာင်ကျော်က ထူးထူးခြားခြားတည်ငြီမ်နေ တယ်။ကိုချိုကြီးကတော့စိတ်လျှော့ လိုက်တဲ့ပုံမျိုး ရှိတယ်။သူသီချင်းဆိုတော့မောနေတယ်။နောက်တနေ့ ၁၉၉၂ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ခင်းတပိုင်းလုံး ပုံမှန်လိုပြီးသွားပြီး ၃ နာရီလောက်ရောက် တော့ထမင်းမြန်မြန်ကျွေဖို့လုပ်တယ်။ထမင်းကို ၄ ယောက်တဝိုင်း ပလတ်စတစ် ပြားနဲ. ပုံပြီးကျွေးတယ်။အဲဒီတော့မျက်နှာချင်း ဆိုင်အတန်းက လူ ၁ ယောက် ၂ ယောက် ပိုနေရင် ဆန့်ကျင်ဘက်မှာသွားပေါင်းရတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ထွန်းအောင်ကျော်ကဝေ့နေ ပြီးကျနော်ထမင်းစားမဲ့ဝိုင်းဘက်ကိုကူး လာတယ်။ ကျနော်တို့ငုံပြိးထမင်းစားနေချိန်မှာ ကိုညီ ကျနော်တော့ အသတ်ခံရတော့မယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး မင်းက Figure ရှိတဲ့သူ တယောက်ပဲ ကိုချိုကို သတ်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။မင်းတော့မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ ကိုညီကျနော်စိတ် ချမ်းသာအောင်ရှောက်ပြောမနေပါတော့၊ကျနော်ပြောတာနားထောင်ပါ။ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျနော်တို့ကို ဒီနေ့သတ်လီမ့်မယ်။စကားပြောသံကြားရတာ ခင်ဗျားကတော့လွတ်လီမ့်မယ်၊ကျနော်နဲ့ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ အဖြစ် မှန်ကို ဖေါ်ပေးပါ။ကျနော် နံမည်ဆိုးနဲ့သေရတာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပေးပါ။ခင်ဗျား လွတ်တဲ့အခါမှာ ဒီကောင် တွေကိုလက်စားချေပေးပါ။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ချိန်မှာ ABSDF ဟာမြန်မာ့ တပ်မတော်ထက် ဆိုးလီမ့်မယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတားဆီးပေးပါ။ထမင်းဝိုင်းမှာ ဝဏ္ဏဇော် ပါတယ်။တခြားတယောက်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ကျနော်က ပြန်ပြောမယ် လုပ်တော့အချိန်မရတော့လို့ပါ။ကျနော် ပြောတာပဲနားထောင် ပေးပါဆိုပြီးမှာစရာရှိတာ တွေမှာတယ်။ကျနော်ပြောစကားကို နားမထောင်နိုင်တဲ့အတွက် တောင်းပန်တယ်။ နောက်ထမင်းဝိုင်း သီမ်းလိုက်တယ်။
ညီညီ (မန္တလေး) ABSDF မြောက်ပိုင်း
ရုရှား လေတပ်သည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ခရုစ်ဒုံးပျံသစ် အား လက်ခံ ရရှိမည်ဟု ဆို
ရုရှား လေတပ်သည် သမားရိုးကျ ထိပ်ဖူးသယ်ဆောင် နိုင်ပြီးပစ်မှတ် များကိုတိကျစွာ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် တာဝေးပစ် RadugaKh-101 ခရုစ်ဒုံးပျံသစ်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် လက်ခံ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ရုရှား လေတပ် က စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု Newsnow သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ပဲ့ထိန်း ဒုံးပျံသစ်သည် မြေပြင်မှ ၃ဝ ပေ(၁ဝ မီတာ) အမြင့်တွင် ပျံသန်းနိုင်စွမ်း ရှိပြီး တာဝေး ၆ဝဝဝ မိုင် (ကီလို မီတာ ၁ဝ,ဝဝဝ) အထိ ရောက်ရှိ ပစ်ခတ် နိုင်ကြောင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း ရုရှားလေတပ်က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ အချိန်တွင် ရုရှားလေတပ်၏ ဗုံးကြဲလေယာဉ် များအား သမားရိုးကျ Kh-555 ခရုစ်ဒုံးပျံ တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းဒုံးပျံများသည် မြေပြင်မှ ၇၅ ပေနှင့်ပေ ၉ဝ အကြား(၂၅ မီတာနှင့် မီတာ ၃ဝ အကြား) အမြင့်တွင် ပျံသန်းနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ Raduga Kh-101 ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံသစ် သည် ယာဉ်ကဲ့သို့သော ရွေ့လျားပစ်မှတ် ငယ်များကိုပါ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟု ရုရှားလေတပ်က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ယခင် Kh-555 ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံ၏ သယ်ဆောင် နိုင်သည့်ပမာဏမှာ ၄၄ဝ ပေါင်(၁၉၉.၅၈ ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီး ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံ သစ်သည် ၈၈ဝပေါင် (ကီလိုဂရမ် ၄ဝဝ) သယ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် ပြည်ပတွင် အခြေစိုက် စခန်းများ မရှိသောကြောင့် ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ် အုပ်ကို အစောင့် အရှောက် အဖြစ် လိုက်ပါ ပေးသောတိုက်လေယာဉ်များ ထောက်ကူ ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ရာ အဆိုပါတာဝေးပစ် ခရုစ်ဒုံးပျံ များသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း ရုရှားလေတပ်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၅၀၀၀ တန် ဖုန်းက အရေးမကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ကျေးလက်ဒေသအထိ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ဖို့သာ အရေးကြီးသည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကောလင်းမြို့မှာ ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက် တစ်ခု၊ စာတိုက်ရှေ့ရှိ စာ တိုက်ပုံးတစ်လုံး၊မြန်မာ့မီးရထား ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်(ဘူတာ) နယ်မြေတွင် စာတိုက် တစ်ခု၊ည (၆)နာရီထိ သိမ်းဆည်းသော စာ တိုက်ပုံးတစ်ပုံးသာရှိသည်။
မြို့ဧရိယာရပ်ကွက်ကြီး ၁၁ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇အုပ် စု၊ကျေးရွာပေါင်း ၂၁၀တွင် လူဦး ရေ(၁၂၂၄၆၇)ဦးတွင် မြို့နေ ၉၁၉၄ ဦး ကျေးလက်(၁၁၃၂၇၃)ဦးရှိပါ သည်။မြို့လူဦးရေနှင့်စာတိုက်ပုံး ထားရှိနှုန်းက အချိုးမကျ၊လွန်စွာ နည်းလှသည်။
ကောလင်းဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်၌ စခန်းမှူး ဆသရ(၃)- ၁ဦး၊ဆသရ(၄)ဦး-၁ဥဦး၊ဆသရ(၅)-၄ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်း၍ စာဝေ စာမှတ်ပုံ တင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။စာဝေဌာန ရပ်ကွက်ကလည်း ဘောင်ကျဉ်း နေပါ သည်။မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အား လုံး စည်ပင်နယ်နိမိတ်အားလုံးကို စာဝေငှနိုင်အောင် ၀န်ထမ်းအင် အားဖြည့်ပေးဖို့လို နေသည်ဟု သိ ရသည်။
ယခု ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းပို့ခ ပြည်ပကျပ် ၅၀၀ထိ တိုးမြှင့်ကောက်ခံနေပါပြီ။အခွန် ထမ်းပြည်သူများ ဖက်ကလည်း စာမရေးချင်မရသဖြင့် စာတိုက် (ဆသရ)ကို အပြေးအလွှားအား ကိုးကြရသည်။
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ပါမှ ပြည်သူလူထု၏ စီ့း ပွားရေးလိုအင်ဆန်္ဒ ၀န်ဆောင်မှု များဖြည့်စွမ်းနိုင်ပါမည်။
ဆက်သွယ်ရေး(ကြေးနန်း) မှ ဖက်စ် FAX တစ်ရွက် (A4) ကို နှစ်ရာကျပ်၊ (Legal ) တစ်စောင် ကို သုံးရာကျပ်ဖြင့် သတင်းများ ပေးပို့နေကြရာ တစ်ဖက်မှ လက်ခံ သောဌာန သတင်းစာတိုက်၊ ဂျာနယ်တိုက်၏ လက်ခံနိုင်မှု အခြေအနေအရ စောင့်ဆိုင်းနေ ကြရသည်။
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စာပို့ လုပ်ငန်း ဖက်စ် Fax ၏၀န်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းများ ထက်မြတ်သွက် လက်စေရန် သတင်းမီဒီယာများ က လိုလာနေပြီး ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ကျေးလက်ဒေသထိ ကွန်ယက်ဖြင့်ကျက်ဖို့လိုပြီ ဒေသခံ များက ပြောကြားသည်။
▼ Oct 01 (36)
တောင်းရမ်းစားသောက်သည့် ကလေးများ၏ နောက်ကွယ်မှ ထိန်း...
စစ်တွေတွင်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည်...
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဂျပန်မှာ လူအများအပြား ...
တစ်ခန်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမ...
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) ဒုတိယ စစ်ဦးစီ...
ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း အစုန်စက်လှေ တစ်စီးပေါ်မှ ကျပ်သ...
မယားဖြစ်သူမှ တံပိုးနှင့်ရိုက်ကာ နှင်ချသဖြင့် ဦးဂမ...
မြောက်ပိုင်း ABSDFလူသတ်ပွဲ အကြောင်း တစေ့တစောင်း - ...
သေနတ်ကို မကြောက်၊ ကြည်ဆံ မှ ကြောက်သည့် လေးဂွ သမားမ...
ရုရှား လေတပ်သည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ခရုစ်ဒုံးပျံသစ် အာ...
၅၀၀၀ တန် ဖုန်းက အရေးမကြီး၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ကျေး...
တရားဝင်ပြည့်တန်ဆာတန်း ရှိသင့်လား?(ပေးစာ - ၁၇၇)
ဆိုက်ဘာ ဥပဒေသစ်ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ဟက်ကာများ အစိ...
နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်မှု ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းြ...
၂၀၁၁ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်မ...
ကောင်းကင်ယံမှ လေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ် ထုတ်ရန် စမ်းသပ်...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရန်ကုန်လေဆိပ်အရောက်တွင် လူထုဖြင့် ...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ် အတိုင်း အထ...
ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင...
လက်ပန်တောင်း စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန် သမ္မတကြီးထံ တော...
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည် ဒုက္ခသည်များအတွက် လိုအပ...
အိမ်ခြေ၂၀၀ကို ကျူးကျော်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖျက်သိမ်းသည့် ...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် မှ ဗွီအိုအေ သို့ ဖြေကြားချက်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အား BBC World News မှ M...
မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသူအား အသေပစ်သတ်ပြီးမှ သားဖြစ်နေမ...
ရုရှစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ မြန်မာနှင့်ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ရန်ြ...